नवलपुर, लमजुङ र तनहुँ बिजयी – Online Annapurna
नवलपुर, लमजुङ र तनहुँ बिजयी
८ माघ २०७६, बुधबार १४:५० January 22, 2020 92 Views
सन्देश श्रेष्ठ पोखरा, माघ ८ । गण्डकी प्रदेश स्तरिय मुख्यमन्त्री कप लिगकम फुटबल प्रतियोगितामा नवलपुर, लमजुङ र तनहुँ बिजयी भएको छ । बुधबार भएको खेलमा नवलपुरको गैंडाकोट खेलकुद विकास समितिले स्याङ्जाको होराइजन क्लबलाई, टि.वाइ.सी. क्लबले मनाङको डाँफे युथ क्लबलाई र तनहुँ फुटबल संघले बाग्लुङ जिल्ला फुटबल संघलाई पराजित गर्दै बिजयी शुरुवात गरेका हुन् ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार भएको पहिलो खेलमा नवलपुरको गैंडाकोट खेलकुद विकास समितिले स्याङ्जाको होराइजन क्लबलाई ३÷१ ले पाखा लगायो । निकै उत्कृष्ट खेलेको नवलपुरको अगाडि स्याङ्जा निरिह देखिएको थियो ।
नवलपुरले स्याङ्जाबिरुद्ध ५ मिनेटमा ३ गोल गरेको थियो । नवलपुरको लागि पहिलो हाफको ११ औं मिनेटमा कुशल प्रताप गुरुङले गोल गर्दै गोलको खाता खोले । पहिलो गोल गरेको २ मिनेट बित्न नपाउँदै नवलपुरको लागी सुरेन्द्र गुरुङले थप एक गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए । १३ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका सुरेन्द्रल १४ औं मिनेटमा पुनः व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरे ।
पहिलो हाफमा ३ गोलले पछि परेको स्याङ्जाको लागि सफल थापाले सान्त्वना गोल गरे । उनले खेलको ४१ औ मिनेटमा गोल गरेका हुन् । स्याङ्जाले थप गोल गर्न नसकेपछि नवलपुरलाई ३÷१ ले नतिजा सुम्पिन बाध्य भयो ।
बुधबार सम्पन्न दोश्रो खेलमा लम्जुङको टि.वाई.सी. क्लबले मनाङको डाँफे युथ क्लबलाइ २÷१ गोल अन्तरले पराजित ग¥यो । लम्जुङको लागि पहिलो हाफको पाँचौं मिनेटमा आशिक गुरुङले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । निकै आक्रमक खेल खेलेको लम्जुङका लागि खेलको ३३ औ मिनेटमा उज्वल शाहीले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए । २ गोलले पछि परेको मनाङले पहिलो हाफमा थप गरिएको २ मिनेटको ईञ्जुरी समयमा सान्त्वना गोल ग¥यो । उसका लागि कर्ण गुरुङले गोल गरे । तर थप गोल गर्न मनाङ असमर्थ भयो र लमजुङलाई नतिजा सुम्पियो ।
बुधबारको अन्तिम खेलमा तनहुँ फुटबल संघले बाग्लुङ जिल्ला फुटबल संघलाई १÷० ले स्तब्ध पा¥यो । तनहुँका लागि दीपक थापाले ५० औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बनेको हो ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत विहीबार पनि ३ खेल हुनेछन् । बुधबारको पहिलो खेलमा नवलपुरको गैंडाकोट खेलकुद विकास र म्याग्दी जिल्ला फुटबल संघ, कास्कीको आदर्श युवा क्लव र मनाङको डाँफे युवा क्लव र बागलुङ जिल्ला फुटबल संघ र स्याङ्जाको होराइजन क्लव आमनेसामने हुनेछन् ।